သုတေသီများရုန်းကန်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်တစ်ဦးကတတိယဧရိယာ privacy ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ် Lowrance (2012) အတော်လေး succinctly ကြောင့်ဝတ်: "။ လူတွေကိုလေးစားရပါမည်ဖြစ်သောကြောင့် privacy ကိုလေးစားရပါမည်" Privacy, သို့သော်, တစ်ဦးနာမည်ဆိုးရှုပ်ထွေးအယူအဆဖြစ်ပါတယ် (Nissenbaum 2010, chap. 4) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, တကခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သုတေသနအကြောင်းကိုတိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါသုံးစွဲဖို့။
privacy ကိုစဉ်းစားရန်တစ်ဦးကဘုံလမ်းတစ် public / private dichotomy နှငျ့အတူရှိ၏။ သတင်းအချက်အလက်လူသိရှင်ကြားလက်လှမ်းလျှင်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဤစကားမစပ်, ထို့နောက်သူကလူရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသုတေသီများအသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤချဉ်းကပ်မှုပြဿနာများကိုသို့ run နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, နိုဝင်ဘာလ 2007 ခုနှစ်, Costa Panagopoulos သုံးမြို့များတွင်လူတိုင်းအနေနဲ့လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးအက္ခရာများကိုစေလွှတ်။ , မြို့နှစ်မြို့အား-Monticello, အိုင်အိုဝါနှင့်ဟော်လန်မှာတော့မီချီဂန်-Panagopoulos / သတင်းစာအတွက်မဲပေးခဲ့ကြသောလူများ၏စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ဖို့ခြိမ်းခြောက်ကတိပြုခဲ့သည်။ အခြားမြို့-Ely ခုနှစ်, အဘိဓါန် Iowa-Panagopoulos / သတင်းစာအတွက်မဲပေးမပေးဖူးသောလူများ၏စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ဖို့ခြိမ်းခြောက်ကတိပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကုသမှုမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုသွေးဆောင်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည် (Panagopoulos 2010) ကဤစိတ်ခံစားမှုအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများအတွက်မဲပေးသူ impact တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (Gerber, Green, and Larimer 2008) ။ ဆန္ဒမဲပေးရပြီးသူကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသည်အများသုံးပါဘူးသူကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်; မည်သူမဆိုကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းကဒီမဲပေးသတင်းအချက်အလက်ပြီးသားအများပြည်သူသောကွောငျ့ကြောင်းငြင်းခုန်နိုင်ဒါ, သတင်းစာထဲမှာထုတ်ဝေနေတဲ့သုတေသီတွေနဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုအငြင်းအခုံအကြောင်းကိုတစ်ခုခုတချို့လူတွေကမှားခံစားရပါတယ်။
ဒီဥပမာသရုပ်ဖော်သကဲ့သို့, public / private dichotomy လွန်းတုံးဖြစ်ပါတယ် (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) ။ အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် Contextual သမာဓိစိတ်ကူးအသက်အရွယ်-ဖြစ်ပါတယ်ခြင်းဖြင့်ကြီးပြင်းလာကိစ္စများကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ privacy ကို-One ကိုစဉ်းစားရန်တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့လမ်း (Nissenbaum 2010) ။ အဲဒီအစားအများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက, Contextual သမာဓိရှိအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းထက်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုအပေါ်အာရုံစိုက်။ အရ Nissenbaum (2010) , "privacy ကိုတစ်ဦးညာဘက် secrecy တစ်ဦးညာဘက်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ဖို့တစ်ဦးညာဘက်ပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏သင့်လျော်သောစီးဆင်းမှုတစ်ဦးလက်ျာဘက်မပါပဲ။ "
Contextual သမာဓိရှိအခြေခံသော့ချက်အယူအဆအခြေအနေတွင်-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ပါသည် (Nissenbaum 2010) ။ ဤရွေ့ကားတိကျတဲ့ setting တွင်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုအုပ်ချုပ်ကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့သုံး parameters တွေကိုဆုံးဖြတ်ကြသည်:
တစ်သုတေသီသကဲ့သို့သင်တို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဒေတာသုံးစွဲဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ကြသောအခါထို့ကွောငျ့မေးရန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် "ဟုဒီအသုံးပြုမှုအခြေအနေတွင်-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများဖောက်ဖျက်သလား" Panagopoulos ၏ဖြစ်ရပ်မှပြန်ရောက် (2010) ကိုဤအမှု၌တစ်ဦးပြင်ပတွင်ရှိခြင်း သုတေသီသတင်းစာအတွက်မဲဆန္ဒရှင်သို့မဟုတ် nonvoters ၏စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ဖို့အချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများချိုးဖောက်နိုင်ဖွယ်ပုံရသည်။ ဤလူမျိုးကိုသတင်းအချက်အလက်စီးဖို့မြျှောလငျ့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတွေကသူ့ကိုရန်အက္ခရာများခြေရာခံနှင့်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးမဟုတျကွောငျးသူ့ကိုဖျောင်းဖျသောကွောငျ့တကယ်တော့, Panagopoulos ဂတိတော် / ခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်မှတဆင့်မလိုက် (Issenberg 2012, 307) ။
context-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ၏စိတ်ကူးကိုလည်းငါ 2014 ခုနှစ်အနောက်အာဖရိကမှာရှိတဲ့အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း mobility ကိုခြေရာခံရန်မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခသစ်လုံးများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အခန်းရဲ့အစမှာဆွေးနွေးကိစ္စတွင်အကဲဖြတ်ရန်ကိုကူညီနိုင် (Wesolowski et al. 2014) ။ ဒီ setting များတွင်တဦးတည်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများစိတ်ကူးနိုင်:
ဤအခွအေနမြေား၏နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဒေတာကုမ္ပဏီထဲကစီးဆင်းနေကြသည်ကိုခေါ်သော်လည်း, ထိုနှစ်ခုအခြေအနေများကိုရည်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစံချိန်စံညွှန်းကြောင့်သရုပ်ဆောင်တွေ, attribute တွေနှင့်ဂီယာအခြေခံမူများအကြားခြားနားချက်များ၏တူညီသောမရှိကြပေ။ ဤအ parameters များကိုတစ်ဦးတည်းသာအာရုံစိုက်အလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ တကယ်တော့, Nissenbaum (2015) ဤသုံးပါး parameters တွေကိုမျှအခြားသူများကိုလျှော့ချနိုင်အလေးပေး, မသူတို့ထဲကတစုံတယောက်သောသူသည်တစ်ဦးချင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အတိတ်အားထုတ်မှု-ထားတဲ့ attribute တွေသို့မဟုတ်ဂီယာဖြစ်စေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြရဲ့ privacy ၏ဘုံ-အသိအယူအဆတွေဖမ်းယူမှာထိရောက်မှုရှိခဲ့အခြေခံမူ-ရှိသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ၏ဤသုံးရှုထောင်သဘောသဘာဝကရှင်းပြသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလမ်းပြအခြေအနေတွင်-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများစိတ်ကူးသုံးပြီးနှင့်အတူတစ်ခုမှာစိန်ခေါ်မှုသုတေသီများရှေ့ဆက်အချိန်ကသူတို့ကိုမသိစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်သူတို့တိုင်းတာရန်အလွန်ခဲယဉ်းများမှာ (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) ။ ထို့ပြင်အချို့သောသုတေသနအလိုအလြောကျသုတေသနဖြစ်ပျက်မပြုလုပ်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါကြောင်းဆက်စပ်-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများဖောက်ဖျက်မယ်လို့လျှင်ပင်။ တကယ်တော့ရဲ့အခန်း 8 Nissenbaum (2010) အကြောင်းကိုလုံးဝဖြစ်ပါတယ် "ကောငျးဘို့ Breaking စည်းကမ်းများ။ " ဤပြဿနာများရှိနေသော်လည်းအခြေအနေတွင်-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနေတုန်းပဲသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုအကြောင်းကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ privacy ကိုငါ Persons နှင့်ကောင်းတဲ့အဦးစားပေးသောသူတို့အဘို့ကိုလေးစားဦးစားပေးသူကိုသုတေသီများအကြားနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကိုမြင်ရပါတယ်ဘယ်မှာဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဝတ္ထုကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားတားဆီးဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်စွာရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကိုယူပြီးလူတွေကိုစောင့်ကြည့်သူတစ်ဦးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသုတေသီ၏ဖြစ်ရပ်ဆိုပါစို့။ ကောင်းတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သုတေသီများသည်ဤသုတေသနကနေလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုမှအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မယ်လို့နှင့်သုတေသီထောက်လှမ်းခြင်းမရှိဘဲသူမ၏ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူမျှမထိခိုက်ရှိကွောငျးကိုငြင်းပေလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစားဦးစားပေးသူကိုသုတေသီများသုတေသီလေးစားမှုနှင့်အတူလူကုသမခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အန္တရာယ်သင်တန်းသားများကိုထောက်လှမ်းရေးသတိထားမဟုတ်ကြလျှင်ပင်, သင်တန်းသားများ၏ privacy ကိုချိုးဖောက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကွောငျးငြင်းခုန်အံ့သောငှါအချက်ကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်အချို့လူများသည်ရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက်နှင့်သူ့ဟာသူတစ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်တွေ (ဘာသာရပ်, ပေးပို့သူ, လက်ခံရရှိသူ), attribute တွေ: privacy ကိုအကြောင်းကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည့်အခါနိဂုံးချုပ်မှာတော့ကြောင့်အလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့ public / private dichotomy ကျော်လွန်ရွှေ့ဖို့နဲ့သုံးဒြပ်စင်ကိုတက်လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွင်-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ, နှင့် ပတ်သက်. အစားကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါသည် (အချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများ) နှင့်ဂီယာအခြေခံမူ (သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းရာအောက်တွင်သတ်) (Nissenbaum 2010) ။ သည်အခြားသုတေသီများနှင့်သူ့ဟာသူတစ်အန္တရာယ်အဖြစ်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏ချိုးဖောက်မှုရှုမြင်သော်လည်းတချို့ကသုတေသီများ၎င်း၏ချိုးဖောက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းထိခိုက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ privacy ကိုအကဲဖြတ်ရန်။ များစွာသောဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏အယူအဆတွေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်သောကြောင့်, လူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှကွဲပြားနှင့်အခွအေနေကနေအခြေအနေကွဲပြားခြားနား (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , privacy ကိုအချို့သုတေသီများအဘို့အခက်ခဲကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များတစ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် နောင်ကာလ။